आफ्नै बहिनीले बिवाह गर्न दवाव दिएपछि,बिवाह गर्न हुँदैन भन्दै दाजुले गरे यस्तो….पुरा पढ्नुहोस ! « Online Tv Nepal
आफ्नै बहिनीले बिवाह गर्न दवाव दिएपछि,बिवाह गर्न हुँदैन भन्दै दाजुले गरे यस्तो….पुरा पढ्नुहोस !
बेलुका खाना खाने क्रममा आमाले मन्दिरालाईं भनेकी थिइन्, ‘दिदी र म बाँकी मास कुट्छौं, तँ मेला जा है।’ खाना खाएर ‘हुन्छ’ भन्दै निस्किएकी आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–२ चोकपुरकी १९ वर्षिय मन्दिरा हालसम्म बे’पत्ता छिन्। यो खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ताप्लेजुङबाट सीताराम गुरागाईंले लेखेका छन्।
मन्दिरालाई बेपत्ता पारेको अभियोगमा दाजु नाताका रमेश अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरुबिच प्रेम सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। रमेशले बयानमा मन्दिराको ह’त्या गरेको स्विकारेको प्रहरीले जनाएको ाछ। ‘मन्दिरा र मेरो दुई वर्षदेखि प्रेम थियो। उसले बिहे गरौं भनेर दबाब दिइरहेको थियो। हामी दुवै अधिकारी भएकाले बिहे गर्न मिल्दैनथ्यो। त्यसैले मा’रि’दिएँ’, रमेशको बयान उदृत गर्दै प्रहरीले भनेको छ। मन्दिराको श व नभेटिएकाले प्रहरीले रमेशलाई व्यक्ति बे पत्ता पारेको अभियोगमा मुद्धा दायर गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।